New To WordPress - Where to Start - Myanmar Wordpress
From Myanmar Wordpress
သင်သည် WordPress စတင်အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင် အကူအညီတစ်စုံတစ်ခုအလိုရှိပါက ဤအရာသည် သင့်အား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်တို့ကို ဖော်ပြပေးမည်။ စိတ်လှုပ် ရှားစရာကောင်းသော WordPress လောကထဲတွင် အကူအညီပေးသည့်အရာများစွာ တို့ကို စုပေါင်းထားပါသည်။
1 လုပ်ရမည့်အဆင့် ၁ - ဖတ်ပါ။
2 လုပ်ရမည့်အဆင့် ၂ - အလုပ်ကို အစီအစဉ်ချပါ။
4.1 Appearance and Themes
4.2 Adding WordPress Plugins
7 Giving Back to WordPress
လုပ်ရမည့်အဆင့် ၁ - ဖတ်ပါ။
WordPress သည် အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်လွယ်ကူပြီး အရည်အသွေးရှိပါသည်။ ဝပ်ဆိုဒ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တိုးတက်စေရေးလုပ်ငန်းများတွင် လျှင်မြန်စွာတိုးတက်နေ သော သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာများပါဝင်သည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ခေါင်းစဉ်များအားလုံးကို အသေးစိတ်ဖတ်သင့်ပြီး သတိထားသင့်သည့် အရေးကြီးသော အချက်များမှာ အချိန်ရင်းနှီးမှုဖြစ်သည်။ ထိုအသိပညာများသည် သင့်အားအချိန်ကုန် သက်သာစေမည်။ ထို့ကြောင့် တန်ဖိုးကြီးမားသော သင့်အချိန်များကို မရင်းနှီးရသေးမီ WordPress ကို မတပ်ဆင်သေးမီ စာရွက်စာတမ်းများကို ကျက်မှတ်ထားခြင်းသည် သင့်ကို ကူညီပေလိမ့်မည်။
ဝပ်ဗလော့(က်)အကြောင်းများ - ဗလော့(က်)ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
WordPress ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
WordPress ကို တပ်ဆင်မှုမပြုလုပ်မီ
လုပ်ရမည့်အဆင့် ၂ - အလုပ်ကို အစီအစဉ်ချပါ။
WordPress တပ်ဆင်မှု၏အကြံပြုချက်များအပါအဝင် သင်ဖတ်ခဲ့ပြီးသော အကြောင်း အရာများမှ သင်သည် ယခုအချိန်တွင် သင်လုပ်ရမည့်အရာများနှင့် လုပ်လိုသည့်အရာ များရှိနေပြီဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါက ထိုလုပ်လိုသည့်အရာများကို စာရွက်တွင် စာရင်းရေးချပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင့်စာရင်းတွင် အောက်ပါအချက်အလက် များဖြင့် ပေါင်းစည်းထားသည်ကို သင့်သေချာစေရမည်ဖြစ်သည်။:
ဝပ်ဆိုဒ်၏ ဟို့(စ်) ၏လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း
PHP နှင့် MySQL တို့၏လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း
ဝပ်ဟို့(စ်)နှင့် WordPress ဗားရှင်းအသစ်တို့ကို အသုံးတည့်စေခြင်း
စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်သည့် ဆော့(ဖ်)ဝဲရ်
FTP Client ပရိုဂရမ်ဆော့ဝဲရ်
အောက်ပါစာတမ်းများသည် သင့်အား WordPress အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် သင့်၏ WordPress အလုပ်ကို စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းကိုပါ ပို၍နားလည်စေရန် ကူညီပေလိမ့်မည်။:
WordPress ကို စတင်အသုံးပြုခြင်း
WordPress အသုံးပြုပုံကို လေ့လာခြင်း
သင့်၏ WordPress ဝပ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းတွင် လိုအပ်ချက်များကို စီစဉ်ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအရာသည် သင့်ကိုယ့်သင်ပြန်မေးရမည့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ WordPress ကို အဓိကဒိုက်ရက်သရီနှင့် ဒိုက်ရက်သရီအခွဲတို့တွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက် (သို့) ဝပ်ဆိုဒ်ကို အစမ်းသုံးလိုသည်ဖြစ်စေ အသုံးပြုမည်ကို သေချာပါစေ။ စာသားများကို အစုလိုက် အဖွဲ့လိုက် နေရာတကျဖြစ်စေရန်အတွက် သင့်ဝပ်ဆိုဒ်အမျိုးအစားခွဲခြင်းကို စာရင်းပြုစုခြင်း ရှိပါသလား။
သင့်ဝပ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဝပ်စာမျက်နှာများပေါင်းထည့်ရမည့် စာရင်းများကို ပြုစုပြီးပြီလား။ ဥပမာ - ပင်မစာမျက်နှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရန်၊ လုပ်ငန်းအချိန်ဇယားတို့ဖြစ်သည်။?
With your installation complete, it's time to set up WordPress so it will work the way you want it to work. To help you understand how all the various features and screens on the WordPress Administration Panels work, check out the Administration Screens guide foradetailed walkthrough.
After you've publishedafew posts, you can experiment with the full edit or quick edit features in the Administration > Posts > Posts panel. Add your "About," "Contact," and other information Pages by going to Administration > Pages > Add New.
Changing the look of your WordPress website is easy with justafew clicks. Using WordPress Themes Introduction
WordPress blog design and layout tutorials on the WordPress Codex
At this point, there may be something about your chosen Theme that is bothering you, or, you really want to get your hands dirty understanding how your WordPress Theme works. These simple guides will help you learn about customizing your WordPress Theme:
Stepping into WordPress Template files
There are many "add-on" scripts and programs for WordPress called Plugins that add more capabilities, choices, and options to your WordPress site. WordPress Plugins do many things, including customizing the results of your site information, adding weather reports, adding spell check capability, and presenting custom lists of posts and acronyms. For more on how to work with Plugins and where to find WordPress Plugins for your site:
Lessons: WordPress Features and Functions
As simple and easy as it is to use WordPress, if troubles arise, if something is confusing, if things aren't working, don't despair because help is available! Even though WordPress is free and open source, there are literally hundreds of volunteers eager to help you. Here are some helpful official resources for WordPress:
WordPress Codex (where you are!)
Retrieved from "http://myanmarwp.com/index.php?title=New_To_WordPress_-_Where_to_Start&oldid=159"	Categories: Pages with broken file linksWordPress LessonsWordPress HelpGetting StartedTroubleshooting	Navigation menu
This page was last modified on 17 May 2014, at 22:16.
This page has been accessed 15,858 times.
About Myanmar Wordpress